Warri Oromon bilisaa bahe jirraa jedhu sun amma maale jedhu laata? Kichuu
HomeNewsAfricaWarri Oromon bilisaa bahe jirraa jedhu sun amma maale jedhu laata?
Warri Oromon bilisaa bahe jirraa jedhu sun amma maale jedhu laata ?
GALMEE HIDHAMTOOTA 2019
Godinaale Oromiyaa garagaraarra humnoota tikaa mootummaan ukkaamfamanii dararaama jiranii muraasa.
1. Dajanee Mammoo Amboorra.
2. Lammaa Fayyisaa Amboorra.
3. Jiksaa Fayyeeraa Amboorra.
4. Alamooyyoo Olaani Kiiramuurra.
5. Fayyisaa Lammaa Amboorra.
6. Dajenee kitabaa Amboorra.
7. Kaasayee Qananiisa Amboorra.
8. Olii Durumaa Amboorra.
9. Qabsoo Durumaa Amboorra.
10. Mangee Tafarii Amboorra.
11. Sefuu Amanuu Aliyyii Wallisoorra.
12. Daggafaa Bayyanaa Naqamteera.
13. Zarihun Caannaalo Naqamteerra.
14. Solomoon Dheeressa Naqamteerra.
15. Dr Mitikuu Getaacho Naqamteerra.
16. Abbebe Maammoo Naqamteerra.
17. Lataa Taammane Naqamteerra.
18. Leeqaa Fiqaadu Naqamteerra.
19. Gammachuu Takilee Naqamteerra.
20. Toomaas Takilee Naqamteerra.
21. Tamasgen Adunyaa Naqamteerra.
22. Lataa Getachoo Naqamteerra.
23. Firdisaa Nagaasaa Naqamteerra.
24. Obbo Fiqiruu Nagaasaa Naqamteerra.
25. Aagee Hambisaa Naqamteerra.
26. Ragu’eel Hayiluu Naqamteerra.
27. Yisiyaq Zaalalam Naqamteerra.
28. Henook Yohaanis Naqamteerra.
29. Burqaa Biraanuu Naqamteerra.
30. Shanqoo Solomoon Naqamteerra.
31. Eliyas Tasfayee Naqamteerra.
32. Qabbannaa Taarikuu Naqamteerra.
33. Laggesee Abeetu Naqamteerra.
34. Iddoosaa Geetachoo Naqamteerra.
35. Gammachis Baqqalaa Finfinneerra.
36. Abdi Imaanaa Hoolatarra.
37. Ibsaa Iggazuu Hoolatarra.
38. Abdi Maammo Najjoorra.
39. Fiqiru Moosisa Najjoorra.
40. Amanu ‘el Adunyaa Mandiirra.
41. Indaaloo Tamasgeen Giddaa Ayyaanarra.
42. Oljirraa Qixxaataa Giddaa Ayyaanarra.
43. Tafarii Galaan Giddaa Ayyaanarra.
44. Zalalem Adaamuu Angar-Guuteerra.
45. Warquu Abeetuu Angar- Guuteerra.
46. Jibiriil Isaa Haaruurra.
47. Naasir Isaa Haaruura.
48. Maammee Zeenuu Haaruurra.
49. Musxafaa Abshiruu Haaruurra.
50. Eliyaas Saalii Haaruurra.
51. Balaayi Kabbadee Haaruurra.
56. Obbo Molaatuu Oljirraa Haaruurra.
57. Dashuraa Molaatuu Haaruurra.
58. Wandimmee Molaatuu Haaruurra.
59. Ahimad Saafii Tujjuu Haranna Bulluqirra
60. Aadam Maammad Usmaanaa Haranna Bulluqirra
61. Kadiir Maammaa Hajjii Haranna Bulluqirra
62. Sabboona Abdii Haranna Bulluqirra
63. Abbaa Gadaa Abbabee Booranaa Hoorroo Guduruu
64. Abbaa Gadaa Lataa Abiishee Hoorroo Guduruu
65. Taakkalaa dhugaasaa Hoorro Guduruu
66. Eebbaa Gindaabaa Hoorroo Guduruu
67. Zakkaariyaas Muktaar Hoorroo Guduruu
68. Dastaa wushaa Hoorroo Guduruu
69. Tokkummaa Himsarmuu Hoorroo Guduruu
70. Nagarii Tarfaa Hoorroo Guduruu
71. Assabaa Namoomsaa Hoorroo Guduruu
72. Tashoomaa Dhufeeraa Hoorroo Guduruu
73. Dinqaa Dheeressaa Hoorroo Guduruu
74. Amsaaluu Baqqaanaa Hoorroo Guduruu
75. Amsaaluu Abdiisaa Hoorroo Guduruu
76. Addunyaa Garbii Hoorroo Guduruu
77. Guddataa Gammadaa Hoorroo Guduruu
78. Faqqadaa Alamuu Hoorroo Guduruu
79. Gaaddisaa Nagarii Hoorroo Guduruu
80. Margaa Abdiisaa Hoorroo Guduruu
81. Taaddasaa Baay’isaa Hoorroo Guduruu
82. Taarikuu Dassaaleny Hoorroo Guduruurra
83. Olaanaa Abarraa Hoorroo Guduruurra.
84. B/saa Siidaa waaqoo Gujii Bahaa
85. Taarikuu Daadee Gujii Bahaa
86. Harsuu Areerii Gujii Bahaa
87. Lookoo Galchuu Gujii Bahaa
89. Yemanu Zawudee Gujii Bahaa
90. Odaa Badhuu Gujii Bahaarra.
91. Kaadiroo Ibirayiim Gujii Bahaarra.
92. Xahaa Koonnoo Gujii Bahaarra.
93. Xahiir Qasiim Gujii Bahaarra.
94. Qaasim Duubee Gujii Bahaarra.
95. Handuqqee Aliyee Gujii Bahaarra.
96. Alamuu Xulii Gujii Bahaarra.
97. Koonnoo sokora Gujii Bahaarra.
98. Odaa Badhuu Gujii Bahaarra.
99. Abduqadiri Qaasim Gujii Bahaarra.
100. B/saa Biqilaa Tolaasa Gujii Bahaarra.
101. Siraaji Hesaa Gujii Bahaarra.
102. Beenyaa Deenus Gujii Bahaarra.
103. Bisilee Waaqoo Gujii Bahaarra.
104. Qamariyaa Usuman Gujii Bahaarra.
105. Sittiina Shifarraa Gujii Bahaarra.
106. Lidiyaa Teessoo Gujii Bahaarra.
107. Saaraa waaqoo Gujii Bahaarra.
108. Abdoo Ilaalaa kafaala Gooroo Doolaarra.
109. Tarikuu Goobana Gooroo Doolaarra.
110. Odaa Uturaa Gooroo Doolaarra.
111. Taarikuu Dhugoo Gooroo Doolaarra.
112. Barbaree Denishoo Gooroo Doolaarra.
113. Sheek Addisuu Gooroo Doolaarra.
114. Galataa Galaanoo Gooroo Doolaarra.
115. Hayiimanoot Alamuu Gooroo Doolaarra.
116. Guyyee xephelloo Adoolaarra.
117. Katamaa shawulee Adoolaarra.
118. Kifilee Jisoo Adoolaarra.
119. Tadelee komolla Adoolaarra.
120. Hasan Yuusuuf Adoolaarra.
121. Kadiir Hasan Adoolaarra.
122. Asaffaa Shuunte Adoolaarra.
123. Note Neenqo Adoolaarra.
124. Bariisoo Neenqo Adoolaarra.
125. Xilawuu Barraqoo Adoolaarra.
126. Gannoo Sirbaa Adoolaarra.
127. Dammaqaa Salaqaa Adoolaarra.
128. Ahanadi Muummee Bulti Adoolaarra.
129. Abbittii Seefee Adoolaarra.
130. B/saa Baadiruu Mahaammad Dambi Doolloorra.
131. Damee Caalaa Barata 12 Gullisoorra.
132. Dagaagaa Faxxanee Gullisoorra.
133. Abirihaam Tolasaa Arroojjii Waddoorra.
134. Inkoosaa Namoo Shaamboorra.
135. Lookoo Yohaannis Finfinneerra.
136. B/saa Haamzaa Abuqaadir Gullisoorra.
137. Waggaa Tafarra Laaloo Assabiirra.
138. Immaanaa Baanqee Biilaarra.
139. Hayiluu Tamasgeen Yuubdoorra.
140. Tasfayee Mitikkuu Qilxu Kaarraarra.
141. Indaaluu Tasammaa Gimbiirra.
142. Addamuu Gondoree Laaloo Assabiirra.
143. Geetanee Guddataa Haaruurra.
144. Warqinaa Fiqaadu Naqamteerra.
145. Ing Daandii Garbooshee Finfinneerra.
146. Abbaa Gadaa Abbabee Nagaasaa Gullisoorra.
147. Boonaa Raagaa Laaloo Qileerra.
148. Tafarii Dhaabaa Gullisoorra.
150. Eebbisaa Geetawoo Finfinneerra.
151. Boonsaa Hayiluu Finfinneerra.
152. Ingidaa Qusii Finfinneerra.
153. Mitikkuu Dhibbisaa Noolee Kaabbaarra.
154. Tamaasgen Sishaa Ogeessa fayyaa Noolee Kaabbaarra.
155. B/saa Waaggarii Itti gaafatama ODP Noolee Kaabbaarra.
156. Abarree Bayisaa Noolee Kaabbaarra.
157. Abbaa Gadaa Balaay Tarfaasa Qilxu- Kaarraarra.
158. Tsaggayee Waannaa Mandiirra.
159. Guutuu Xibabuu Jaarsoorra.
160. Yohaannis Fufaa Gullisoorra.
161. Mitikkuu Yohaannis Gullisoorra.
162. Carraa Tasfayee Gullisoorra.
163. Tasfayee Yaadata Gullisoorra.
164. Raagaa Kumarraa Gullisoorra.
165. Abbaa Gadaa Abdoo Huseen Gullisoorra.
166. Yoseef Abarraa Gullisoorra.
167. Hiikaa Eebbisaa Karra Waayyuurra.
168. Fuhaad Alii Beddelleerra.
169. Masgabuu Fiixee Beddelleerra.
170. Kaasahun Dabalaa Beddelleerra.
171. Gammachis Immiruu Beddelleerra.
172. Moosisaa Nagaasaa Beddelleerra.
173. Wubee Taammiruu Iluu Abbaa Booraarra.
174. Adoola Areero Buukee Gujii, Sabbaa Boruurra.
175. Girjaa Jaarsoo Gujii,Sabbaa Boruurra.
176. Baqqalaa Waacillee Gujii, Sabbaa Boruurra.
177. Tasfayee Halakee Gujii, Sabbaa Boruurra.
178. Mirkataa Qilxaa Gujii, Sabbaa Boruurra.
179. Danbalaa Adulaa Gujii, Sabbaa Boruu, Wacilleerra.
180. Quuxala Dhadacha Gujii, Sabbaa Boruu, Kotooboorra.
181. Dhaabaa Abbaa Xurraa Gujii, Sabbaa Boruurra.
182. Yaatanii Qilxaa Gujii, Sabbaa Boruurra.
183. Dhugoo Baqqajjo Gujii, Sabbaa Boruurra.
184. Ayyalaa Bariisoo Gujii, Sabbaa Boruurra.
185. Tarikuu Addisuu W/ Lixaarra.
186. Toomas Fayisaa W/Lixaarra.
187. Galataa Tasfayee W/Lixaarra.
188. Garooma Namiomsaa W/Lixaarra.
189. Gammachuu Dirribsaa Horroo Guduruurra.
190. Duulaa Horroo Guduruurra.
192. Firoomsa Ayyalaa W/Lixaarra.
193. Amanu’el Taaffasee W/Lixaarra.
194. Lammii Olaansa W/Lixaarra.
195. Habtamuu Oliiqa W/Lixaarra.
196. Tolaa. W/ Bahaarra.
197. Tammiruu Girmaa W/Bahaarra.
198. Dangulee Baqqalaa
199. Gaddisaa Tasammaa Q/ Wallaggaarra.
200. Tarikuu Aagaa
201. Dassaleenyi Nagarii W/Lixaarra.
202. Musee Kumarraa W/Lixaarra.
203. Qalbeessaa W/Lixaarra.
204. Jaafar Birraatu Q/ Wallaggaarra.
205. Gurmuu Leenjisaa H/ Guduruurra.
206. Tashomee Gobanaa W/Lixaarra.
207. Cannaqaa Abdiisaa Mandiirra.
208. Dhibbisaa Abarraa W/Lixaarra.
209. Abdiisaa Faradaa Gullisoorra.
210. Tagabbaa Waltajjii W/Lixaarra.
211. Alamayyoo Dabaloo E/Bahaarra.
212. Abdii Jireenya Q/Wallaggarra.
213. Biqilaa Alamayyoo Q/Wallaggaarra.
214. Mu’aaz Mohaammad W/Lixaarra.
215. Guutama Caalii/Bahaarra.
216. Fantaa Fiqaadu W/Lixaarra.
217. Abdiisaa Gammadaa W/Bahaarra.
218. Tamasgeen Fiqaadu Q/ Wallaggaarra.
219. B/saa Gammachuu Dabalaa.
220. B/saa Gadaa Eebbisaa.
221. Daldalaa Abarraa Nagaasaa.
222. Balaayi Ayyana.
223. B/saa Biqilaa.
224. Geetaachoo Dhufeeraa.
225. Waaktolaa Shifarraa.
226. Nuuraddiin Mulaatu.
227. Lalisaa Baayisaa.
228. Jaal Amaan Filee Naqamteerra.
229. Jaal Dambii Tashoomaa.
230. Jaal Faqqadaa Raggaasaa.
231. Kolonel Gammachuu Ayyaanaa Finfinneerra.
232. Dinqiisaa Qannoo Naqamteerra.
234. Gammadaa Halakee
235. Xilahuun Baanataa
236. Neenqa Daadhii
237. Jaarsoo Abbaa waaqo
238. Canaa Girjaa
239. Gololcha Haroo
240. Haroo Dooyyoo
241. Geedoo Tuundhee
242. Madaksaa Fiixee
243. Gololchaa Gobanaa
244. Duubaa yaachisii
245. Turee xisoo
246. Mijuu Adulaa
247. Daadhii Dhadachaa
248. Dajanee Qilxaa
249. Goobanaa Didoo
250. Duubee Xiso
251. Maammoo Adulaa
252. Mijuu Adolaa
253. Edema Eliyaas
254. Taddesee Halake
255. Ayele Eliyas
256. Lamnaa Tafarraa
345. Sharifi Ahmed
259. Adunyaa Kaasaye
261. Urrreessaa Asafa
262. Ijaaraa Taaddasaa
263. Baaccuu Margaa
264. Bushii Deesisaa
265. Gololcha Goobanaa
266. Duubaa Yaachis
267. Turee Xissoo
268. Duubee Xissoo.
269. Dejenee Qilxaa Goloo.
270. Guutuu Qana’aa.
272. Jaafar Mahaammad-Saanii.
273. Abdi Yaree.
274. Yaasin Ispharaa.
275. Boontuu Waaqwayyaa.
276. Lammaa Uraagoo.
277. Baqqalaa Galchuu.
278. Sintaayyoo Kabbadaa.
279. Dambii Turee.
281. Maammoo Abbabaa Teessoo.
282. Abarraa Obsii .
283. Waaqtolee Galataa .
284. Ayyaanaa Amanuu.
285. Kifilee Suyyum .
286. Tashomee Dajanee.
287. Misgaanaa Itichaa.
288. Addisuu Taammanaa .
289. Hansaar shamsuu.
290. Balaay Nuurii.
291. Tasfayee Caalii/Bahaarra.
292. Gammachis Mitikkuu W/Lixaarra.
293. Maatiyaas Waaqwayyaa W/Lixaarra.
294. Abbabee Dhufeera H/ Guduruurra.
295. Gaaroma Namoomsa W/Lixaarra.
296. Shibbiruu Qananii W/Lixaarra.
297. Fayisaa Guuttata W/Lixaarra.
298. Xa’aa Habtamuu W/Lixaarra.
299. Abdoo Ashaabbir Qondaalarra.
300. Dirribaa Olqanaa Mandiirra.
301. Gammachis Buushaa Q/Wallaggaarra.
302. Iliyaas Q/ Wallaggaarra.
303. Tarraqanyii Kumarra Q/ Wallaggaarra.
304. Tashooma Tarreessaa W/Bahaarra.
305. Bayisaa Dirribaa Amboorraa.
310. Asheetee Caalaa Amboorra.
311. Eenyummaa Kumalaa Amboorra.
312. B/saa Guddataa Qana’aa Boojjiirra.
313. Masfiin Ballaxaa Amboorra.
314. B/saa Waltajjii Geetahuu Mettaa Roobiirra.
315. Mootii Shaambii Buraayyuurra.
316. Obsee Qannoo Buraayyuurra.
317. Dastaa Jalduu H/ Guduruurra.
318. Mootii Dastaa Horro Guduruurra.
319. Mulgeetaa Guddataa H/ Guduruurra.
320. Lammeessaa Fayisaa H/ Guduruurra.
321. Daanyee Taganyee H/Guduruurra.
322. Duulaa Gurmeessa H/Guduruurra.
323. Abbaa Gadaa Gammachuu Hundee H/ Guduruurra.
324. Addunyaa Baayisaa H/ Guduruurra.
325. Katamaa Baayisaa H/Guduruurra.
326. Alamaayyoo Guddataa H/Guduruurra.
327. Tamaasgen Zallaqaa H/Guduruurra.
328. Booranaa Oljirraa H/Guduruurra.
329. Alamaayyoo Tasfayee H/Guduruurra.
330. Asaffaa Guddata H/Guduruurra.
331. Maammushee Tarrafaa H/Guduruurra.
332. Firdisaa Gammadaa H/Guduruurra.
334. Dhaabaa Baayisaa H/Guduruurra.
335. Kabbadaa Fiqaaduu H/Guduruurra.
336. Darajjee Dhinsaa H/Guduruurra.
337. Tamasgeen Qannoo H/Guduruurra.
338. Katamaa Manyar H/Guduruurra.
339. Garramuu Yaadataa H/Guduruurra.
340. Shifarraa Yaadataa H/Guduruurra.
341. Fiqaaduu Namoo H/Guduruurra.
342. Ayyaantuu Geexii H/Guduruurra.
343. Assabaa Namoomsaa H/Guduruurra.
344. Geexii Baabee H/Guduruurra.
345. Baqqalaa Qarxaa H/Guduruurra.
346. Gammachuu Gaaddisaa H/Guduruurra.
347. Abbaa Gadaa Addunyaa Amantee H/Guduruurra.
348. Abbaa Gadaa Lataa Abiishee H/Guduruurra.
349. Abbaa Gadaa Abbabaa Biraanaa H/Guduruurra.
350. Nagirii Lataa H/Guduruurra.
351. Gammachis Fufaa H/Guduruurra.
352. B/saa Hundumaa Namarraa H/Guduruurra.
353. Zakkariyaas H/Guduruurra.
354. Amaanu’el Beekkataa Naqamteerra.
354. Qabbannaa Magarsaa Gullisoorra.
355. Geetuu Taaddasaa Shaamboorra.
356. Sanyii Lammeessaa Naqamteerra.
357. Hordofaa Taaddasaa Naqamteerra.
358. Sa’id Abdiisaa W/Lixaarra.
359. Jarrab Umar W/Lixaarra.
360. Abdallaa Taammanaa Salaaleerra.
361. Damee Damussee Salaaleerra.
362. Dhaabaa Dabalee Salaaleerra.
363. Zawudee Asfawuu Salaaleerra.
364. Damee Dheeressaa Salaaleerra.
365. Balay Taayyee Salaaleerra.
366. Gammachuu Fiqaaduu Ayiraarra.
367. Guutuu Qana’aa Ayiraarra.
368. Guutuu Mokoonnon Ayiraarra.
369. Damee Daggafaa Ayiraarra.
370. Abbaa Gadaa Abdiisaa Sooreessoo Ayiraarra.
371. Geetachoo Oljirraa Ayiraarra.
372. Mitikkuu Garbaa Ayiraarra.
373. Jaallataa Tolasaa Ayiraarra.
374. Lookoo Yohaannis Buraayyuurra.
375. Eebbaa Balaachoo Naqamteerra.
376. Adam Mohammad Ciroorra.
377. Abdii Muhamad Mi’eessoorra.
378. Gammachis Baqqalee
379. Shaanqoo Solomoon.
380. Boonsaa Hayiluu
381. Tammiraat Tamasgeen.
382. Xibabuu Dachasaa.
383. Jaarraa Baayisaa.
384. Fayyeeraa Mokonnon
385. Fiqiruu Dassee.
386. Dirribaa Taaddasaa.
387. Ingidaa Kusii Dambi Doolloorra.
388. Taarikuu Guddata
389. Baacaa Margaa
390. Abdallaa Imaanaa
391. Tafarii Maammoo
392. Inj Daandii Garbooshee Finfinneerra.
393. Mammad Oliyaad
394. Raaguu’eel Haayiluu.
395. Yaadataa Miiltoo
396. Yooseef Dheeressaa.
397. Gaaromaa Jalduu
399. Girmaa Hundumaa
401. Jaarraa Baayisaa
402. Girmaa Tamasgeen Gimbiirra.
403. Nigaatuu Biraanuu Gimbiirra.
404. Masgabuu Gimbiirra.
405. Daani’eel Haayiluu Gimbiirra.
406. Abbabee Dinqaa Gimbiirra.
407. Tafarii Mokonnin Gimbiirra.
408. Makuree Gimbiirra.
409. Aaddee Mili’oon Gimbiirra.
410. Maammush Gimbiirra.
411. Solomoon Nagaasaa Gimbiirra.
412. Sa’id Shariif Gimbiirra.
413. Saachoo Firee Ayiraarra.
414. Qabbanaa Shaanbii Ayiraarra.
415. Qalbeessaa Noonnoo Ayiraarra.
416. Geetachoo Abdataa Ayiraarra.
417. Dastaa Tarrafee Ayiraarra.
418. Qabbanaa Ayiraarra.
419. Guutuu Efureem Ayiraarra.
420. Nagumaa Ayiraarra.
421. Solomoon Naggasaa Gimbiirra.
422. Nigaatu Baqqalee Gimbiirra.
423. Samsoon Bulaa Gimbiirra.
424. Gammee Bushuraa Gimbiirra.
425. Tafarii Maammoo Gimbiirra.
426. Isaayyas Mulgeetaa Gimbiirra.
427. Waaqtolee Bulchaa Laaloo Assabiirra.
428. Jajjabee Iddoosaa Haaruurra.
429. Abbaa Gadaa Tazarraa Margaa Najjoorra.
430. Gammachuu Gullisoorra.
431. Kenneesa Gullisoorra.
432. Xilaahun Dongooroorra.
433. Gammachuu Beegiirra.
434. Daawwit Manfiirra.
435. Yoosef Sayyoo Nooleerra.
436. Dajjaamach Bayyanaa
437. Addisuu Mangistuu
438. Sanyii Amsaalu
439. Gammachis Beekuma
440. Malkaamuu Baacaa.
441. Lammii Caalaa Amboorra.
442. Marsiimoyii Amboorra.
443. Darajjee Sayyoo Nooleerra.
444. Gabiree Abbaa seenaarra.
445. Jaafar Sayyoo Nooleerra.
446. Daldalaa Adimaasuu Gimbiirra.
447. Eebbisaa Abbaa Restooranti Yaa’ii Gulaallee Gimbiirra.
448. Naasiraddiin Barataa kutaa 5ffaa Beegiirra.
449. Xilaahun Dongoroorra.
450. Lijaalem Gimbiirra.
451. Abbaa Gadaa Balay Beegiirra.
452. Nigaatu Biraanuu Gimbiirra.
453. Shariif Gimbiirra.
454. Gammachuu Mandiirra.